နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: ဇော်ဂျီ သတ်ပုံစာလုံးပေါင်း။ (သို့) ပေါက်ကရ အိတ်တီ့ (၃)၊
ရေးသားသူ Ko Boyz at 8:21 PM
khin oo may July 9, 2008 at 10:33 PM
ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းပါတယ်။ မဟုတ်ရင် တကယ်လို လေထဲလွင်.သွားမှာ နှမျောစရာ။ အတော့်ကို ကြိုးစားအားထုတ်ပြီး ရေးထားတဲ.စေတနာ ကို မြင်ပြီး လေးစားမိပါတယ်။
Ko Boyz July 9, 2008 at 10:40 PM
အဟဲ...။ ရေးပြီးမှာ ဇော်ဂျီ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ထဲက လက်ကွက် ပုံကို မြင်မိတယ် အစ်မရေ...။ ရော့အင့်ဆိုပြီး ပ့ပေးလိုက်ရင် ပိုလွယ်တာပေါ့...။
ဇနိ July 9, 2008 at 10:42 PM
ကြွက် ကို ကြွက်လို့ရေးရင် ပိုဟုတ်မယ်နော် ကိုကြွက် ဆေားတီး ကိုဘွိုင်(ဇ)
Ko Boyz July 9, 2008 at 10:43 PM
ဟုတ်တယ်...။ မွားသွားတယ်...။ ပြန်ပြင်လိုက်ပါမယ်...။ ကျေးဇူးပါ မဇနိ...။
ကော်ပီ ပေ့စ်လုပ်တာ လက်လွန်သွားလို့ပါ...။ ဟီး
ဇနိ July 9, 2008 at 10:54 PM
ဟန်သစ်ငြိမ်ဆီမှာ တွေ့တဲ့ဟာလေးပါ တွဲလေ့လာလိုက်။
ကိုပေါ July 10, 2008 at 9:33 AM
မွေးရာပါ ၀ါသနာအတိုင်း အပြစ်ဖွေရှာ ထောက်ပြလိုက်ဦးမယ်…
ကျွန်ုပ်သည် ကြွက်ကို ကြွက်ဟု ရေးသားနေခြင်းများအား လုံးဝခွင့်မလွှတ်။ ရရစ်ခေါင်းပြတ်ကို “ြ ” ကို နေရာအလျောက်သုံးစွဲသကဲ့သို့ပင် ၀ဆွဲ နှင့် တွဲမည်ဖြစ်သော ရရစ်များမှာ ၀ဆွဲထည့်ရန်အတွက် ရရစ်အမြီးပြတ်“ြ ” ဖြစ်သင့်ပါသည်။
အလားတွင်ပင် “ပြွန်” အစား “ပြွန်” က သာ၍ သင့်လျော်သည်ထင်၏။ အပြတ်များ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သရ များ (လုံကြီးတင်၊ တချောင်းငင်၊ ၀ဆွဲ စသည်တို့) ကို ထည့်သွင်းရိုက်နှိပ်ရန် ဖြတ်ထားခြင်းဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ သရမပါသောနေရာများတွင် အပြည့်ကိုဘဲ သုံးစွဲပါရန်……
ဤဥပဒေသများကို မလိုက်နာပါက “မြန်မာစာ” ခုံရုံးတော်တွင် အသင် မောင်ဘွိုင်းဇ်အား “ပစ္စည်း” အလွဲသုံးစားလုပ်မှုဖြင့် စီရင်ချက်ချကာ “သရ”တောင်စွယ်မှာ“၀ိဘတ်” နေမကွယ်ခင် “သတ်ပုံ” စည်းကမ်းနဲ့အညီ “၀ါကျ” ကားစင်တွင်တင်ကာ “အက္ခရာ” ဓားဖြင့် “ဗျည်း”တွေ ဗျစ်ကနဲ ထွက်လာအောင် အပြစ်ပေးမည်။
Ko Boyz July 10, 2008 at 9:55 AM
To Ko Paw, there got something wrong with my KB. I can't type those combination as such Dead Key + Shift + "x" (x represent the respective key).
That's why while I tried to type ပစောက် ပါဌ်ဆင့်, it will appear as "၌" ...
Dunno wht is wrong with my KB.
May be KB or may be the font version.
(My font version is the one they released during "The Blog Day")
မေ July 10, 2008 at 8:40 PM
အတော်ပဲ နောက် စာရိုက်နည်းနဲ့ ပတ်သက်ရင် မပြောတော့ပဲ ဒီပို့စ်ကို ညွှန်းရုံပဲ။
ဆြာ့ကို ဆြာထပ်လုပ်လိုက်ဦးမယ် :P
နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ ဇော်ဂျီဖွန့်မှာ ၀ (သုည) နဲ့ ဝ (ဝလုံး) စာလုံး ပုံစံ မတူအောင် လုပ်ထားပြီနော်။ ဝလုံးကို ရိုက်ချင်ရင် Shift+, (<) ကို ရိုက်မှ အမှန် စာလုံးပုံထွက်ပါတယ်။ ၀ (သုည) က အလယ်မှာ ဓားနဲ့ ခုတ်ထားလို့ ပြတ်နေတယ်။ ဝလုံးကတော့ စင်းလုံးချောလေး :P
Ko Boyz July 10, 2008 at 8:47 PM
တိလယ်...။ တိလယ်...။ ဝ (၀) လဲ ၀(စုံည) ကို ရိုက်နေလာ...။ ခက်လာက ၀ ဇော်ဂျီ ၂၀၀၈ ဇော်ဂျီ မီဟုတ်လော့ ၀(၀) ဘီလိုပဲ ၀(၀) ရိုက်.. ရိုက် ၀(စုံည) ပဲရိုက်..ရိုက်... ထွက်လာတာ အားလုံးတူတူပဲ ဖစ်နေလယ်...။ လုရိုက်ပြတာတွေလဲ တူတူပဲ...။ ၀လုံးလား... စုံညလား ဆိုတာ မီကွဲဘူးလော့...။ လုပြောသလို ဓါးခုတ်ရာလို ဘာလို ဖစ်တာ မီစိဖူး...။ ၀လဲ ဇော်ဂျီဆို အသစ် အင်စတောလ်လုပ်တိုင်း တူက ၀ ဆက်တင်ကို ၀င်ဝင် ပြောင်းလွန်းလို့ ၀လဲ လန့်ဘီး ၂၀၀၈ ဗားရှင်းကို မီသုံးသေးတာ...။ လု အင်စတော်လ် လုပ်လို့ အဆင်ပြေတယ်ဆို ၀ ကိုပြောလေ...။ ၀ ပြောင်းသုံးလိုက်မီ...။ တံချောင်း ခေါက်လိုက်လေနော့...။
ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ် July 11, 2008 at 6:19 PM
မြန်မာစာကိုချစ်တယ်.. စားလုံးလေးတွေ စနစ်တကျနဲ့ဆို အရမ်းလှပြီး မြင်ရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်.. အဓိပ္ပါယ်လည်းပို ပြည့်စုံပြီး စာလုံးလေးတွေကြွတက်လာတယ်.. မြန်မာစာကိုချစ်ကြသူများအားလုံး ပျော်ရွှင်ကြပါစေ..
Nay Nay Naing July 11, 2008 at 8:15 PM
ရကောက် အမြီးပြတ် နဲ့အောက်ကမြစ် ရေးတာ အတွက် ကျေးဇူးပဲ :)
အရုဏျဦး July 16, 2008 at 12:10 PM
အရုဏျဦး July 16, 2008 at 12:12 PM
ဒေါန်းတော့ Dead Key ကို မသုံးဖြစ်ဘူး။ Shift, Alt, Ctrl ကီးတွေပဲ တွဲသုံးဖြစ်တာ များတယ်။ အခုလို မြန်မာစာသတ်ပုံမှန်အောင် ရိုက်ဖို့အတွက် နည်းပေးလမ်းပြ လုပ်ပေးထားတဲ့ စိုင်းစိုင်းဘွိုင်းလှိုင် (အလဲ့.. မိုက်တယ်ကွာ)ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
ksanchaung December 17, 2008 at 2:17 AM
(၄)စားရပါသော စွယ်စုံရ ဇာတ်မင်းသားလေး စိုင်းစိုင်းဘွိုင်းလှိုင် -
သိုင်းကျူးသိုင်းကျူး။ အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ဇော်ဂျီနဲ့ပါဌ်ဆင့်မရသောကြောင့် ဘယ်သူ့မေးရမှန်း မသိ။ ယခု အဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
Ko Boyz December 17, 2008 at 10:01 AM
အားလုံးသော ဘလော့ဂ်ကြွလာ မိတ်သဟာ အပေါင်းတို့ခင်ဗျား...။
မြန်မာစာ သတ်ပုံများ မှန်ကန်ရေးအတွက် တစ်ဘက်တစ်လမ်းက ကူညီခွင့်ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။
အဆင်ပြေကြတယ်လို့ သိရတဲ့ အတွက်လဲ ၀မ်းသာမိပါတယ်။
တစ်ကယ်လို့ ဟိုးအပေါ်ဆုံးက အစ်မ ခင်ဦးမေသာ ဒီပို့စ်အတိုင်း လိုက်ရိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင် အတိုင်းထက် အလွန်ပါပဲ။
ဒါပေမဲ့လဲ သတ်ပုံမှားတာ သူ့စတိုင်ဆိုတော့ သူသတ်ပုံမှန်သွားရင် သူ့ identity လေး ပျောက်သွားမှာလဲ စိုးရိမ်မိတယ်။
Unknown December 30, 2008 at 10:04 AM
ဆြာဂျီး ဝင်လုပ်တာ မဟုတ်ပါ
khin oo may February 4, 2010 at 11:21 PM
မေဇင် June 14, 2012 at 2:47 PM
ကိုဘ ... ဂန်ဒ ကိုကြတော့ ရိုက်မပြဘူး...ကဏ(ဏအောက်မှာ ထည့်တာလေးက ဘာနဲ့ ဘာရိုက်ရမှာလဲ) ပီးတော့ အဲ့ ဏ အောက်မှာ ပါတာလေးက တရင်ကောက် လို့ ခေါ်လား တရင်က က အဲ့လို မှောက်ခုံလုပ်လို့ရလားးးးး
Ko Boyz June 14, 2012 at 6:21 PM
ကဏ္ဍ ကို shift +2နှိပ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေတယ်။
ဏ္ဍ က အော်တို ပါလာပြီးသား... မှောက်ခုံလုပ်စရာ မလိုဘူး။
ပို့စ်ထဲက ကီးဘုတ် လက်ကွက် Layout လေး ပရင့်ထုတ်ကြည့်ရင် ပိုမြင်လွယ်မယ်...။